Huawei P30 iyo P30 Pro: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Sida la xaqiijiyay dhowr toddobaad ka hor, baaxadda Huawei P30 ayaa la soo bandhigay si rasmi ah maanta oo ay taarikhdu ku beegan tahay 26 bisha Marso. Toddobaadyadan waxaa jiray xan badan oo ku saabsan tan cusub ee dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha. Qayb ka mid ah qeexitaannadeeda ayaa daadanayay, taas oo loo oggol yahay inuu yeesho fikrad cad intii aan filanaynay. Ugu dambeyntiina, horey ayaa loo soo bandhigay.
Maaddaama Huawei P30 iyo P30 Pro ay rasmi yihiin. Dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha, oo ay ka go'an tahay naqshad cusbooneysiin ah, iyo sidoo kale fiiro gaar ah u leh kaamirooyinka, halkaasoo astaanta loo dejiyay inay tahay halbeeg qeybtan. Laba sare oo kaladuwan oo shirkaddu dooneyso inay miiska garaacdo.
Marka xigta waan kula hadlaynaa mid kasta oo ka mid ah labadan taleefan shaqsi ahaan. Waxaan marka hore soo bandhigeynaa qeexitaannada mid kasta oo ka mid ah, si aad fikrad uga hesho. Kadib, waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo iyaga ku saabsan, iyo isbeddelada badan ee shirkaddu ku soo bandhigtay noocyadan kala duwan ee Huawei P30s. Maxaan ka filan karnaa iyaga?
1 Caddaymaha Huawei P30
1.1 Huawei P30: Horumarka-dhamaadka sare
2 Caddaymaha Huawei P30 Pro
2.1 Huawei P30 Pro: Sawir qaadista sida diirada loo saaray
2.2 Processor, RAM, kaydinta iyo batteriga
Caddaymaha Huawei P30
Waxaan marka hore ku bilaabaynaa qaabka u bixiya magaceeda dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha. Taleefan casri ah oo tayo leh, kaas oo aan ku arki karno isbeddelka naqshadeynta ee lagu soo bandhigay. Sida wuxuu adeegsadaa qashin yar oo qaab dhibic biyo ah, wax badan oo caqli badan, oo aan xukumin shaashadda. Intaa waxaa sii dheer, Huawei P30-kan waxaa ka go'an yareynta shaashadda shaashadda ugu badnaan. Maxaa u oggolaanaya in laga faa'iideysto wejiga hore ilaa ugu badnaan.
Dhabarka gadaashiisa waxaan ku haysannaa kamarad saddex-laab ah aaladda. Intaa waxaa dheer, dareeraha faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda qalabka. Kuwani waa Huawei P30 qeexitaan buuxa:
Huawei P30 qeexitaan farsamo
Screen 6.1-inch OLED oo leh Full HD + xalka 2.340 x 1.080 pixels iyo 19.5: saamiga 9
Kaamirada gadaal 40 MP leh aperture f / 1.6 + 16 MP aperture f / 2.2 + 8 MP oo leh aperture f / 3.4
Xuduudaha kala duwan Dolby Atmos Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c IP53 GPS GLONASS
Batariga 3.650 Mah oo leh SuperCharge
Cabbirada X x 71.36 149.1 7.57 mm
Peso Gram 165
Waxaan ka sarreeynaa dhammaan dusha sare, taas oo cadeynaysa horumarka ay kala duwanaanshahani ay ku yeesheen sanadahan. Haddii horeyba sanadkii hore waxaa jiray boodbood weyn oo xagga tayada ah, oo waliba loo tarjumay iib wanaagsan. Waxyaabaha ay calaamaddu dooneyso inay ku soo celiso sannadkan moodooyinka cusub, iyadoo Huawei P30 uu hogaaminayo.
Naqshad wanaagsan, noocyo wanaagsan, iyo horumar badan, taas oo aan waxbadan kaaga sheegi doonno xagga hoose, si aad u ogaato waxa noocan ah dhamaadka-sare uu inooga tegayo.
Huawei P30: Horumarka-dhamaadka sare
Dhinaca kale, waxaan arki karnaa in sumadda Shiinaha ay ula jaanqaadayso suuqa xagga naqshadeynta. Waxay nooga tagayaan darajo taxaddar badan, kaas oo xukuma shaashadda taleefanka wax yar. Marka lagu daro looxyo aad u dhuuban, oo u oggolaanaya in si wanaagsan loo isticmaalo aaladda hore. Dhanka dambe, oo ka sameysan muraayad, waxaan ka helaynaa seddexdan kamaradood ee dambe.
Kaamirooyinka ayaa shaki la'aan ah barta xoogga leh ee cusboonaysiinta dhamaadka sare ee sumadda. Waxaan sidoo kale ku arki karnaa Huawei P30-kan, oo soo bandhigaya saddex dareemayaal kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah dareemayaasha wuxuu u adeegaa ujeedo, waana iskudhafkan oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay sawirro tayo sare leh marwalba la qaadaan dhammaadka-sare. Intaa waxaa dheer, sirdoonka macmalka ah ayaa mas'uul ka ah kobcinta kamaradahaas, sidoo kale hore. Kaamirada hore waxaan sidoo kale leenahay furitaanka wajiga qalabka. Dareeraha faraha ayaa la geliyay shaashada hoosteeda, sidii la filayay bilo.
Qalabku wuxuu la yimaadaa batari awood leh oo ah 3.650 Mah, kaas oo sidoo kale leh deg deg deg ah. Marka lagu daro Kirin 980 iyo Android Pie, waxaan ka filan karnaa ismaamul weyn. Waxay sidoo kale la timid lakabka ugu dambeeyay ee nooca Shiinaha, EMUI 9.1 asal ahaan.
Caddaymaha Huawei P30 Pro
Meesha labaad waxaan ka helnaa taleefanka hogaaminaya qaybtan sare ee nooca Shiinaha. Casriye casri ah oo tayo leh, awood leh oo qeexitaan wanaagsan leh Ku saabsan design, Huawei P30 Pro sidoo kale wuxuu adeegsadaa qashin yar oo qaab dhibic biyo ah shaashadda. Xusuusin badan oo caqli badan, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si buuxda uga faa'iideysato xagga hore ee qalabka. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku leenahay afar dareemayaal, seddex kamaradood iyo dareemayaal TOF ah, isku dhafan oo dhaafa kamaradaha xirfadleyda ah
Inta soo hartay, Huawei P30 Pro wuxuu noqdaa telefoonka ugu fiican ee aan ka helno buugga Ee sumadda. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee qalabka:
Xuduudaha kala duwan Dolby Atmos Bluetooth 5.0 jaak 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c GPS GLONASS IP68
Cabbirada X x 158 73.4 8.41 mm
Peso Gram 192
Naqshadda cusub ka sokow, Huawei P30 Pro wuxuu sidoo kale caan ku yahay midabada cusub. Waxay ahayd sanad ka hor markii ay sumaddu soo bandhigtay midabbo wejigooda ah, oo aan mar dambe ku aragnay telefoonno dheeri ah oo ku jira buug-yaraheeda, marka lagu daro inuu "dhiirrigelin" u yahay noocyo kale oo badan oo ku saabsan Android. Qaabka sanadkan waxaan leenahay midabyo cusub, kuwaas oo kala ah:
Pearl white (waxay la mid tahay codka luul)
Amber Sunrise (Saamaynta miisaanka leh ee udhaxeysa liinta iyo casaanka)
Aurora (waxay u egtahay midabada Nalalka Waqooyiga, oo leh hooska u dhexeeya buluug iyo cagaar)
Neefsashada Cristal (midab buluug ah oo ay dhiirrigelisay biyaha Kariibiyaanka)
Xulashada ugu xiisaha badan, ee loogu yeero inay ku guuleystaan ​​adeegsadayaasha xulashadan. In kasta oo nashqaddu aysan ahayn waxa keliya ee isbeddelay qaybtan sare ee dhammaadka ah ee astaanta ah. Tan iyo markii aan sidoo kale ka helno warar badan taleefanka, kuwaas oo calan cusub ka dhig ee sumadda, bil ka dib markii soo bandhigida Mate X.
Huawei P30 Pro: Sawir qaadista sida diirada loo saaray
Shaki la'aan, kaamirooyinka ayaa ah hubka weyn ee Huawei P30 Pro. Nooca Shiinaha ayaa adeegsanaya isku darka afar dareemayaal taleefanka. Waxaan ku leenahay meesha ugu horeysa ee 40 MP shidma weyn oo leh f / 1.6 aperture Oo waxay ku timaaddaa shaandheeye cusub oo RGB ah. Cagaarka shaandhada RGB waxaa lagu beddelay codad huruud ah, si ay ugu yeelato xasaasiyad weyn iftiinka, heerka kamarad xirfadeed. Dareeraha labaad waa 20 MP xagal ballaaran oo 120º ah oo leh f / 2.2 iyo saddexaad, taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh.
Tan iyo markii Huawei uu soo bandhigo dareeraha 8 MP oo leh fur f / 3.4, laba jibbaaran, tan iyo isla waxaan leenahay 5x zoom periscope. Waa dhawaansho layaableh, oo u oggolaanaysa 10x zoom optical, 5x zoom hybrid iyo 50x zoom digital, iyada oo aan lumin tayada. Dhinac loogu yeeray inuu kacdoon ku sameeyo suuqa. Iyada oo ay weheliso waxaan leenahay aaladda TOF, oo loogu talagalay in lagu fahmo hawlgalka kamaradda, iyo in la awoodo in lagu dabaqo hagaajinta. Taasi waa sababta aan sidoo kale ugu leenahay sirdoon macmal ah.
Kaamirooyinka Huawei P30 Pro waa kacaan ka socda suuqa. Waxay sidoo kale isticmaalaan AIS, oo u oggolaanaysa xasillooni gaar ah sawirrada, oo leh habeyn habeyn ah oo loo dhigo sida ugu fiican suuqa. AI HDR + sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay kaamirooyinkaas. Thanks to tikniyoolajiyaddan, iftiinka ayaa lagu fahmi karaa waqtiga dhabta ah, u oggolaanaya iftiinka in la magdhabo haddii loo baahdo. Wax muhiim u ah hawlgalkeeda dhammaan noocyada xaaladaha.
Ugu dambeyntii labadaba OIS iyo AIS ayaa lagu soo bandhigay fiidiyowyada. Marka fiidiyowyada waa la xasilin karaa wakhti kasta, xitaa marka duubista fiidiyowga habeenkii. Taas oo u oggolaaneysa tayo sare dhammaan noocyada xaaladaha. Kaamirada hore, 32 MP oo leh f / 2.0 aperture ayaa loo isticmaalaa, halka aan sidoo kale ku leenahay furitaanka wajiga.
Wixii processor ah, Kirin 980 waa kan la doortay by brand sida maskaxda this Huawei P30 Pro. Processor-ka ayaa la soo saaray sanadkii hore Waa tan ugu awoodda badan ee aan ku leenahay noocyada noocyada kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaan ka helnaa joogitaanka sirdoonka macmalka ah. Waxay sidoo kale leedahay qayb farsameyn gaar ah u leh tan.
Sida loogu talagalay RAM, waxaan helnaa hal ikhtiyaar oo ah 8 GB oo RAM ah, inkasta oo aan dhowr keyd haysanno. Isticmaalayaasha waxay awood u yeelan doonaan inay kala doortaan inta u dhexeysa 128, 256 iyo 512 GB ee keydinta gudaha ah. Dhammaan isku-darka waxay leeyihiin suurtagalnimada in la ballaariyo meelaha la sheegay, sidaa darteed awoodda kaydinta dhib kuma noqon doonto isticmaale kasta.
Batariga, sida lagu xanto, awooddiisa ayaa la kordhiyay. Huawei P30 Pro wuxuu leeyahay batari awood leh oo ah 4.200 Mah. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka helnaa 40W SuperCharge lacag degdeg ah oo ku jirta. Waad ku mahadsan tahay lacagtan, 70% batteriga waxaa lagu soo oogi karaa 30 daqiiqo oo keliya. Waxaan sidoo kale ku leenahay lacag la'aan wireless.
Maaddaama ay tahay nidaam hawlgal waxay mar horeba la timid Android Pie hooyo. Iyada oo ay weheliso qaybtan, waxaan haynaa EMUI 9.1 oo ah lakab qaabeyn ah. Marka lagu daro processor-ka, iyo howlaha maareynta batteriga ee Android Pie, is-maamulku ma noqon doono dhibaato ka jirta meelaha sare. Dhinac kale oo muhiim ah.
Marka la ogaado tilmaamaha labada taleefan, waxaan kaliya u baahan nahay inaan ogaano goorta laga bilaabi doono dukaamada, marka lagu daro qiimaha ay ku yeelan doonaan nooc kasta oo ka mid ah noocyadooda. In kasta oo kiiskan, waxaan ka helnaa hal nooc kiiska qaabka ugu fudud .
Xaaladda Huawei P30, waxaan leenahay hal isku dhafan oo ah 6/128 GB. Qiimaha taleefankan uu ku leeyahay suuqa Isbaanishka waa 749 euro, maadaama ay suurtagal noqotay in la ogaado mahadsanid shaandhaynta hore, maxaa yeelay Carrefour ayaa taleefannada ku iibisay iibinta waqti hore. Waxaa lagu bilaabay midabbo kala duwan, sidii markii horaba looga faallooday waqtigaas, sida madow, Aurora ama Breathing Crystal. Macaamiisha ayaa awoodi doona inay doortaan midabka ay rabaan. Shan midab guud ahaan, labada moodel.
Dhinaca kale, Huawei P30 Pro wuxuu la yimid dhowr isku dhafan oo kala duwan 8/128 GB, 8/256 iyo 8/512 GB. Marka macaamiisha waxay awood u yeelan doonaan inay doortaan iyagoo ku saleynaya midka ay u arkaan inuu ugu habboon yahay iyaga. Xaaladdaada, qiimayaashu waa:
Nooca leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeyn doonaa 949 euro
Huawei P30 Pro oo leh 8/256 GB wuxuu ku yimaadaa qiimo dhan 1049 euro
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei P30 iyo P30 Pro: Dhamaadka-dhamaadka waa la cusbooneysiiyay